अमेरिकी र्‍यापर भर्टको नि,’धारमा खो,’पिएको २ अर्ब ८२ करोडको हिरा चोरी ! - Nepali in Australia
अमेरिकी र्‍यापर भर्टको नि,’धारमा खो,’पिएको २ अर्ब ८२ करोडको हिरा चोरी !
September 8, 2021 autherLeaveaComment on अमेरिकी र्‍यापर भर्टको नि,’धारमा खो,’पिएको २ अर्ब ८२ करोडको हिरा चोरी !
अमेरिकाका चर्चित र्‍यापर लिल उजी भ,’र्टको निधारमा खो,’पिएको गुलाबी रङको निकै महँगो हिरा चोरी भएको छ। सीएनएनका अनुसार उक्त गु,’लाबी रङको हिराको मूल्य २४ मिलियन अमेरिकी डलर हो (२ अर्ब ८२ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ)।
सो हिरा सर्जरी गरेर उनको निधारमा खो,’पेर राखिएको थियो। वास्तवमा गत जुलाईमा भएको क,’न्सर्टमा उनको हिरा निधारबाटै फु,’त्काइएको हो। उनले सन् २०१७ मा उक्त हिरा लोनमा खरिद गरेका थिए। हालसम्म पनि उनले सो हिराको बाँकी रकम तिर्न सकेका छैनन्। उनले किस्तामा हिराको मूल्य चुकाईरहेका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस –मुम्बई(दैनिक जागरण)– बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारलाई मा,’तृशोक परेको छ । अक्षयले ट्वीटर र इन्स्टाग्राम एकाउण्टमार्फत आमा अरुणा भाटियाको नि,’धन भएको जानकारी दिएका छन् ।
अभिनेताकी आमा केही दिनदेखि अस्वस्थ भएपछि उनी आइसियूमा उपचाररत थिइन् । ‘उहाँ मेरो लागि सबै कुरा हुनुहुन्थ्यो र आज म भित्रबाटै धेरै दुःखी महशुस गरिरहेको छु । मेरी आमा श्रीमति अरुणा भाटियाले आज बिहान शा,’न्तपूर्वक यो विश्वबाट बि,’दा हुनुभयो ।
उनी मेरो पितासँग दोस्रो विश्वमा गएर मिल्नुभयो । म र मेरो परिवार जुन दुःखमा गु,’ज्रिरहेका छौं । यसमा म तपाईंहरुको प्रा,’र्थनाको इ,’ज्जत गर्छु । ओम शान्ति’, अक्षयले लेखेका छन् ।अक्षयले मंगलबार इन्स्टाग्राममा एक पोस्ट शेयर गर्दै आमाका लागि केही घण्टा नाजुक रहेको र फ्यानलाई प्रार्थना गर्न आग्रह गरेका थिए ।
अक्षयको आमालाई मुम्बईस्थित हि,’न्दुजा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । यहीकारण लण्डनमा सु,’टिङ भइरहेको फिल्म ‘सिण्डरेला’को काम छो,’डेर अक्षय मुम्बई आएका थिए ।
६ जनाको श’व उठाउदा गाउले र प्र’हरी बिच झ’डप , श’वको खो’साखो’स मेयर र प्र’हरीको यस्तो (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
पब्जी खेल्दा आमाको बैंक खाताबाट १० लाख चट! बाबुले दिए प्रहरीमा छोरा बिरुद्ध उजुरी, घटना के हो?